ကိုယ်သုံးနေတဲ့ password လုံခြုံမှုရှိမရှိစစ်မယ် - .::just for share::.
Home » နည်းပညာ » ကိုယ်သုံးနေတဲ့ password လုံခြုံမှုရှိမရှိစစ်မယ်
ကိုယ်သုံးနေတဲ့ password လုံခြုံမှုရှိမရှိစစ်မယ်
Darkling Ko Darkling ရဲ့FB wall ပေါ်ကနေမ. လာတာပါ
သူငယ်ချင်းသုံးနေတဲ့ Password လုံခြုံမှုရှိမရှိ စစ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာ
အင်တာနက် အသုံးပြုနေတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအဖို့ password တစ်ခုတော့ ပိုင်ဆိုင်ကြမှာ ပါအင်တာနက်အသုံးပြုသူတိုင်း Password နဲ့တော့ ကင်းကြမှာမဟုတ်ပါဘူး ဒီတော့ ကိုယ်သုံးနေတဲ့ Passwordလုံခြုံမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျ http://www.passwordmeter.com/) အခု ကွန်တော်ဖော်ပြထားတဲ့လင့်ကို သွားပြီး စစ်ဆေးကြည့်လိုက်ပါမှတ်ချက်။ ။ စိမ်းနေရင် စိတ်ချရတယ်ပေါ့ဗျာ။။နီနေတယ်ဆိုရင်တော့ ပြောင်းပေတော့သူငယ်ချင်း စိတ်မချရဘူး ဒီနေရာကျွန်တော်ပြောချင်တာတစ်ခုက hackingသုံးနေတဲ့တဲ့ hacker သမား တွေ စိန်ခေါ်ချင်မျိုး မဟုတ်ပါဘူး လို့ မေတ္တာရပ်ခံပါစေဗျာ ကျွန်တော်အကောင့်လေးတော့ မလုပ်ကြပါနဲ့နော် တောင်းပန်ပါရစေ ) password ဆိုတဲ့ နေရာမှာ ကိုယ် လက်ရှိသုံးနေတဲ့ ဘယ် pw မဆို ရိုက်ထဲ့လိုက်ပါ hide လုပ်လည်းရပါတယ် မှားမှာဆိုးရင် no hide ပေါ်ပီး ရင် ခဏစောင့် လိုက်ပါ အနီးတွေ များနေရင် မသေခြာပါဘူး အစိမ်းများနေရင် ok ပါတယ် ခင်မျာ